Tsara tarehy tsara
Nice - tanàna malaza any amin'ny Reniranon'i Frantsa, izay manana ny tantaran'ny taonjato maromaro teo an-tsorony. Tonga eto ny mpizaha tany isaky ny vanim-potoana. Amin'ny fahavaratra dia mankamin'ny tora-pasika tondraka izy ireo, ary amin'ny ririnina dia andrasana any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Alpes. Na dia teo aza ny fiheverana fa i Nizza dia tanàna fialam-boly tsy misy dikany, dia lavitra ilay raharaha. Ireo toerana izay ahafahanao miaraka amin'ny fialam-boly ara-panahy sy ara-kolontsaina dia tsy dia kely loatra. Anisan'ireo tsara tarehy any Nice, any Frantsa, miresaka amim-pahatsorana ireo tranombakoka, katedrala, fiangonana, zaridaina sy lapa.
Sehatry ny tanànan'i Nice
Ny Mozea Marc Chagall any Nizza
Ny Mozean'i Marc Chagall dia tsy manana afa-tsy ny fizotry ny dingana feno amin'ny asan'ny tompony. Ny ampahany anatiny dia noforonin'i Chagall manokana ho an'ity tranom-bakoka ity. Noho izany, ilay mpanakanto nalaza manerantany, namorona manokana ny fitaratra sy mozika, izay napetraka tao amin'ny efitrano fampisehoana.
Ny mpitsidika tsirairay dia manana tombontsoa manokana mba hijery amin'ny antsipiriany ny andiam-pandaharana rehetra avy amin'ny tsingerina "Ny Hafatry ny Baiboly". Ankoatra ny olom-pantatra iray momba ny asan'i Marc Chagall, afaka mandehandeha eny amin'ny valan-javaboary akaikin'ny tranombakoka ireo mpizaha tany.
Ny Mozea Matisse any Nizza
Ny famoronana hafa mpamorona iray, Henri Matisse, dia misolo tena ao amin'ny tranom-bakoka misy ny anarany ao Nice. Ny fanapahan-kevitra ny hanokatra ny Matisse Museum tao an-tanàna dia tsy tafiditra. Ilay mpanakanto sy ny mpanao sary sokitra dia tia an'ity tanàna ity ary eto, amin'ny alàlan'ny fiderany azy, dia nahatsapa fifaliana.
Ny faritr'ilay tranombakoka dia trano natsangana tamin'ny taonjato faha-17 tany amin'ny havoana Nizza niaraka tamin'ny fomba fijery mahafinaritra ny tanàna. Ao amin'ny tranom-bakoka Matisse dia misy sary an-tsary 200 mahery. Amin'ny alalan'izy ireo no ahafahana mamantatra ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny teknikan'ny mpanoratra. Ny mpitsidika koa dia afaka mahita sary sokitra maherin'ny 70, izay nataon'i Henri Matisse.
Museum of Fine Arts any Nice
Ny mpankafy mpankafy indrindra indrindra ny Museum of Fine Arts, izay nanangona ny asa fanangonam-bokatra nataon'ireo artista sy sculptors tamin'ny taonjato faha XV - XX.
Ilay tranobe izay teo aloha dia ny tranon'ny Princess Kochubei sy ny baolina lavalava dia napetraka teo amin'ny faritaniny. Androany, misy ampahany manan-danja amin'ny endriky kanto amin'ny vanim-potoana mahafinaritra ireo fotoana ireo, ary tsy manelingelina ny fiheverana avy amin'ny zava-dehibe - ny asan'ireo mpamorona. Ny fanangonana ny zavakanto, anisan'izany ireo mpitsidika, no nanomboka nanolotra azy ho fanomezam-pahasoavan'ny mpanangom-bokatra manokana. Ny asa nataon'ireo artista dia nomena an'i Napoleon III tamin'ny tranombakoka. Androany, afaka mahita ny vokatry ny asan'i Picasso, Shere, Vanloo, Monet, Degas, Rodin ary mpanakanto hafa sy mpanao sary sokitra manerantany.
Katedralin'i St. Nicholas ao Nice
Ny katedraly Nicholas Cathedral ao Nice dia mendrika ny saintsin'ireo mpitsidika ao an-tanàna. Tsy katedraly Ortodoksa any Nice fotsiny izy io, fa iray amin'ireo trano sarobidy ara-kolontsaina ara-panahy ivelan'i Rosia ihany koa.
Natao tamin'ny 1912 ny katedrala. Ireo tompon'andraikitra tsara indrindra ao Rosia sy Eoropa dia niasa tamin'ny tranokely sy ny antsipiriany. Ny ampahany amin'ny tsipiriany momba ny fasadina sy ny fandravonana anatiny ny katedral dia aseho amin'ny sary sokitra marbra. Ny tanàna ho an'ny fanorenana ny Katedraly St. Nikola dia nofinidy tsy ho vintana, satria i Nice nandritra ny fitondrana dia toerana fialantsasatra ankafizin'ny aristokraty Rosiana.
Inona koa no hitanao any Nice sy ny manodidina azy?
Tsara - tanàna mahafatifaty mahafatifaty. Ny natiorany amin'ny zavamaniry hafakely sy ny harena ara-kolontsaina manan-karena dia manamafy kokoa ny fahatsapan'ireo mpizahatany momba an'io zoron'ny Riviera frantsay io. Anisan'ireo toerana mahaliana an'i Nice sy ny faritra manodidina anao dia afaka manamarika ny trano Efrussi de Rothschild sy Grimaldi Castle. Ny toeram-ponenana roa dia hita any amin'ny toerana izay ahafahanao mankafy ny fomba fijery mahavariana momba ny manodidina an'i Nice. Ny fahatsapana dia manampy amin'ny zaridaina mahafinaritra, rava ao amin'ny faritaniny.
Ny mpankafy ny zavakanto, ankoatra ireo tranombakoka, dia tokony hitsidika ny Museum of Modern Art sy ny National Museum Fernand Leger. Eny, raha ny fialam-boly dia tsy tafalatsaka aminao, dia hahaliana ny fitsidihana ny valan-drano lehibe indrindra any Eraopa , Marineland, ary ny zaridainan'i Monaco sy Eze, izay faritra misy ny karazan-java-maniry maro samihafa.
Inona no tokony hatao mandritra ny 3 andro?
Toerana misy an'i Santorini
Park Europe, Alemaina
Tontolon'ny Wax Madame Tussaud
Fifehezana fandefasana amin'ny seranam-piaramanidina
Ireo nosy malaza indrindra eran'izao tontolo izao
Romania - toerana mahafinaritra
Turin - toetrandro
Veliky Novgorod - mpizahatany mpizaha tany
Ny dite tsara indrindra dia ny rose liqueur
Mofomamy avy amin'ny milina fanasana
Ny mariazy ao an-trano dia famantarana
Hygiène ny zazavavy vao teraka
Varavarana varavarankely ho an'ny fandroana
Heripoitra ara-pananahana amin'ny fitondrana vohoka
Ultrasound amin'ny herinandro faha-7 amin'ny fitondrana vohoka
Vehivavy daflkot - inona io ary inona no tokony hampiarahana azy?
Vehivavy bevohoka atao hoe Kate Middleton no tratra tao amin'ny fivarotana lehibe
Tablets avy amin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny fitondrana vohoka
Ny mpilalao sarimihetsika Charlie Sheen dia nilaza fa te hiala an-tsitrapo ny fiainany izy taorian'ny nianarany ny aretiny
Sary avy amin'ny plasticine
Ahoana no haka sary tsara tarehy?
Taratasy vita amin'ny volafotsy - ireo modely tsara tarehy indrindra
Stucco miora amin'ny foam
Ny Nosy St. Micholas
25 ny tsiambaratelon'ny dia, izay tsy fantatry ny mpandeha